Sony ကက PS4 မှ PS One နဲ့ PS2 ဂိမ်းဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည် - သတင်း Rule
Sony ကက PS4 မှ PS One နဲ့ PS2 ဂိမ်းဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်
က Playstation မတူဘဲ3(PS3) emulator, အသစ်က Playstation အခုတော့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အဝေးကနေအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မည်သည့်, canon တစ်ဦး emulator အင်ဂျင်အားဖြင့်ပြည်တွင်းဖြစ်ပြန်ဆိုပါလိမ့်မည် Sony ရဲ့က Playstation အတွက်အစောပိုင်းက consoles စများအတွက်ဂိမ်း.
အဆိုအရ Eurogamer, အ emulator မသာအတိတ်၏ဂန္ထဝင်ဂိမ်းမျိုးပွားလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်း upscaling သူတို့ကိုအတိတ်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့တစ်မှုန်ဝါးရှုပ်ထွေးဖြစ်လာသူတို့ကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်လမ်းအတွက်. တစ်ဦးများအတွက်အယူအဆ “HD ကို remaster” ထိုယင်ကောင်အပေါ်ကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုထားကြောင်းင်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုထက်အသုံးပြုသူများအဖို့ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလိမ့်မည် PS3 ဂိမ်း.
ဒါဟာခေါင်းစဉ်အချိန်အတွင်းက Playstation Network ကိုမှလာကြလိမ့်မည်ထင်သည်, နှင့် features တွေအများအပြားအခုက Playstation အပေါ်ပုံတူကူးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း. သို့သော်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဟောင်းတွေဂိမ်း၏အောက်ပိုင်းမျက်နှာပြင်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏, တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်အဆင့်အထိဂိမ်းကို update လုပ်ဖို့က PS4 ၏တိုးမြှင့်အာဏာကိုသုံးစွဲဖို့ကပိုအရေးကွီးက.
ဒါကမေးခွန်းမှဦးဆောင်, Sony ကအဟောင်းတွေမျိုးဆက် console ကိုဂိမ်းအဘို့ဤအကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, အဘယ်ကြောင့် PS3 ခေါင်းစဉ်ဘို့မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုမှကျူးလွန်ခဲ့သည်? ရသည်မှာအဖြေကိုပိုက်ဆံဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အဘယ်သူ၏သီလ Sony က extolls ၎င်း၏ပစ္စုပ္ပန်က PS4 စျေးကွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာအားလုံးကျော်ကိုပြန်လူကြိုက်များ PS3 ပေါ်မှာဂိမ်းအဘို့အဆပ်ဖို့ပရိသတ်တွေအဘို့အခွင့်အလမ်းဖွင့်အဖြစ်.
Moody junk မှ Sony ရဲ့အကြွေးအဆင့်အတန်းကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်အဖြစ်, ဂျပန်ကနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည်၎င်း၏ PS3 ၏သစ္စာခံပရိတ်သတ်အခြေစိုက်အပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ဖို့ပိုနည်းလမ်းများရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ် ဂိမ်းစက်. ဤအတောအတွင်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်အသုံးမ PS3 optical discs တွေကိုအမှိုက်သရိုက်များချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုစျေးဆိုင်၏လိပ်ခေါင်း. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, Sony ကက PS4 မှ PS One နဲ့ PS2 ဂိမ်းဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
27460	2 Play Station ကများစာရင်း3ဂိမ်းများ, Play Station က, PlayStation Network, Sony က
← ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုလက်စွပ်အတွက်တရားစွဲခံရဆယ်ကျော်သက်မီးမောင်းထိုးပြသွားခဲ့တယ် 25 သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ် Boost စေရန်အစားအစာများ Wonder →